Otú Ị Ga-esi Na-akwụsi Ike n’Ihe I Kwuru | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Oromo Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Nwa gị anaghị ekwe ekwe mgbe ọ bụla ị jụrụ imere ya ihe o kwuru. Ị jụ imere ya ihe o kwuru, ya ebido ibe ákwá. O nweghịkwa ihe ị ga-eme ma ọ bụ kwuo ga-eme ka o mechie ọnụ naanị ma i mere ihe ahụ. O bekatazie ákwá, gị emeere ya ihe ahụ ị jụrụ ime.
Ị ga-amụtali otú ị ga-esi na-akwụrụ n’ihe i kwuru. Ka anyị buru ụzọ kwuo ihe ụfọdụ i kwesịrị ịma.
Ịjụ ime ihe nwa gị kwuru apụtaghị na ị na-emegbu ya emegbu. Ụfọdụ ndị nne na nna na-eche na ha kwesịrị imere nwa ha ihe ọ bụla o kwuru nakwa na ha kwesịrị ịrịọ ya ma ọ bụ kọwaara ya ihe mere ha ji jụ ime ihe ahụ. Ha na-ekwu na nwa ha ga-ewe iwe ma ha jụ ime ihe o kwuru.
Nke bụ́ eziokwu bụ na obi agaghị adị nwa gị mma ma ị jụ ime ihe ọ chọrọ. Ma, ọ ga-akụziri ya ezigbo ihe. Ọ ga-amụta na ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ na-enweta ihe ọ chọrọ n’ụwa a. Ọ bụrụ na ọ na-abụ ị jụ imere nwa gị ihe o kwuru, e mechaa gị emeere ya ihe ahụ maka na ọ na-ebe ákwá, ọ gaghị na-eji ihe i kwuru akpọrọ ihe. Ọ ga-emekwa ka ọ na-ebe ákwá mgbe ọ bụla ị jụrụ imere ya ihe ọ chọrọ n’ihi na ọ ma na ya besie ákwá ike, i meere ya ihe ahụ. Ka oge na-aga, o nwere ike ime ka nwa gị wesawa gị iwe ma ị jụ ime ihe o kwuru. Ị manụ na ọ bụrụ na ị naghị akwụrụ n’ihe i kwuru, nwa gị agaghị na-akwanyere gị ùgwù.
Ị jụ ime ihe o kwuru, ị na-akụziri ya otú ọ ga-esi na-akpa àgwà ọma ma o too. Ọ ga-amụta na mmadụ ileghara ihe na-agụ ya agụụ anya mgbe ụfọdụ bara uru. Ọ bụrụ na nwa gị amụta na ịhapụ ihe ụfọdụ bara uru, ọ ga-enyere ya aka mgbe ọ na-eto. Ọ ga-eme ka ọ jụ iso ndị ọgbọ ya na-aṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụkwanụ na-akwa iko.
Ọ bụrụ na ị na-ajụ imere nwa gị ihe ụfọdụ, ị na-azụ ya ka ọ ghọọ mmadụ. Otu ọkachamara aha ya bụ David Walsh sịrị, “N’eziokwu, ọ bụghị ihe niile mmadụ chọrọ ka ọ na-enweta n’ụwa a. Ụmụ anyị agaghị aba uru ma ọ bụrụ na anyị na-akụziri ha na mmadụ ga na-enweta ihe ọ bụla ọ chọrọ.”
Lekwasị anya n’ihe ị chọrọ. Ị chọrọ ka ihe gaziere nwa gị, ka ọ baa uru, ka ọ na-ejidekwa onwe ya. Ma, ọ bụrụ na ị na-enye ya ihe ọ bụla ọ nara gị, ọ gaghị abụ ụdị onye ahụ. Baịbụl gosiri na ọ bụrụ na a zụtọọ nwata, o too, ọ ga na-atụ anya na ọ ga na-enweta ihe ọ bụla ọ chọrọ. (Ilu 29:21) N’ihi ya, ọ bụrụ na ị na-ajụ imere nwa gị ihe ọ chọrọ mgbe ụfọdụ, ị na-azụ ya ka ọ baa uru. Ọ ga-amụtakwa ihe na ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 19:18.
Amala ọnụ jijiji. Gị na nwa gị abụghị ọgbọ. N’ihi ya, ọ baghị uru ka gị na ya rụwa ụka ka à ga-asị na ọ bụ ya ga-agwa gị ihe ị ga-eme. Ka ụmụaka na-eto, ha kwesịrị ịzụ ikike nghọta ha azụ, ka ha nwee ike na-amata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi. (Ndị Hibru 5:14) N’ihi ya, ọ dịghị njọ ma gị na nwa gị na-akparịta ihe ụfọdụ. Ma, gị na ya ekwesịghị ịnọ na-arụ ụka banyere ihe mere i ji jụ ime ihe o kwuru. Ọ bụrụ na gị na ya anọrọ na-arụ ụka mgbe niile banyere ihe mere i ji jụ, ọ ga na-agba ihe ọ bụla i kpebiri ụkwụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Efesọs 6:1.
Kwụrụ n’ihe i kwuru. Nwa gị nwere ike bewe ákwá ma ọ bụ rịọwa gị arịrịọ ka ọ mara ma ị ga-agbanwe obi gị. Ọ bụrụ na o mee ihe a mgbe unu nọ n’ụlọ, gịnị ka ị ga-eme? Ihe otu akwụkwọ kwuru banyere ịzụ ụmụaka kwuru bụ: ‘Gwa ya ka ọ gaa n’ime ụlọ nọrọ, obi ya dajụọ, ya pụta. Gwakwa ya na ị chọghị ịnụ ihe ọ bụla ọ chọrọ ikwu maka na ị gaghị agbanwe obi gị.’ O nwere ike isitụrụ gị ike na mbụ ịgwa nwa gị ụdị ihe a, nwa gị nwekwara ike iche na ị na-egwu egwu. Ma, ọ ga-ege gị ntị ma ọ chọpụta na ị na-akwụ n’ihe i kwuru.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 5:12.
Ya abụla mgbe ọ bụla nwa gị kwuru ihe ị ga-emere ya, gị ajụ, ka i wee gosi ya na ọ bụ gị mụrụ ya
Adịla na-esi ọnwụ mgbe niile. Ya abụla mgbe ọ bụla nwa gị kwuru ihe ị ga-emere ya, gị ajụ, ka i wee gosi ya na ọ bụ gị mụrụ ya. Kama, na-eme ihe otú na-egosi na i “nwere ezi uche.” (Ndị Filipaị 4:5) Nke bụ́ eziokwu bụ na e nwere ihe ụfọdụ i kwesịrị imere nwa gị. Ma, i kwesịghị ịna-emere ya ihe o kwuru maka na ọ na-ebe ákwá ma ọ bụ na-esi ọnwụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Kọlọsi 3:21.
“Nye nwa gị ntaramahụhụ mgbe olileanya ka dị.”—Ilu 19:18.
“Ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi.”—Ndị Efesọs 6:1.
“Ka Ee unu bụrụ Ee, ka Ee e unu bụrụkwa Ee e.”—Jems 5:12.
ỊJỤ IME IHE ỤFỌDỤ NWA GỊ CHỌRỌ BARA URU
Otu ọkachamara aha ya bụ David Walsh kwuru, sị, “Ndị nne na nna na-achọ ka obi na-adị ụmụ ha mma mgbe niile. Ma, ọ bụrụ na o nweghị mgbe ihe ị na-eme na-ewe nwa gị iwe ma ọ bụ wute ya, mara na ị na-azụtọ ya. Ọ bụrụ na ị naghị eme ihe ga-ewute nwa gị oge ụfọdụ, olee otú ọ ga-esi mụta ịna-edi ihe ndị mmadụ ga-eme ya ma o too? Ọ bụrụ na ị naghị akụziri nwa gị otú ọ ga-esi na-ejide onwe ya, olee ebe ọ ga-amụta ya? Ọ bụ gị kwesịrị ịkụziri ya na ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ na-enweta ihe ọ chọrọ n’ụwa a.”
Gịnị ka i nwere ike ime ma nwa gị bido ime isi ike ụmụaka? Ihe Baịbụl kwuru ga-enyere gị aka ịma ihe i kwesịrị ime.
Ọ bụrụ na nwa gị anaghị ekwe eme ihe ị gwara ya, e nwere aro ise ga-enyere gị aka ka ị kụziere ya ka ọ na-erube isi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Ị Ga-esi Na-akwụsi Ike n’Ihe I Kwuru